Addunyaan Woyyaaneetti dudda kennuu eegalte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Addunyaan Woyyaaneetti dudda kennuu eegalte
Lubbuu Oromoo baasaa fi abbaa-irrumaa dagaagsaa michummaan hin jiru jetti Angelaa Merkil
Addunyaan mootummaa Woyyaaneetti dudda kennuu eegaluu isii wantoonni argisiisan heddummaataa dhufaniiru. Chaansilariin Jarmanii, Angelaa Merkil, yeroo Itoophiyaa daawwattetti carraa argame hundatti fayyadamtee Woyyaanee salphiste. Paarlaamaa Itoophiyaatti dhiyaatte akka dubbattu affeeramtus paarlaamaa harka paartii tokkootti kufetti hin dubbadhu jettee affeerraa isaanii kuffifte. Angelaa Merkil Woyyaanee woliin osoo hin taane mormitoota waliin kan dhaabattu ta’uu ifafftti dubbatte. Mootummaan Woyyaanee hatattamaan ajjeechaa, doorisaa fi ukkaamsaa dhaabuu akka qabus jala sarartee itti himte.
Jarmaniin dabalatee biyyoonni worra dhihaa hundi Woyyaaneen ummataa ajjeesaa fi ukkaamsaa isaaniin michoomuu akka hin dandeenne ifatti dubbataa jiru. Yeroo kanatti Woyyaaneen addunyaa irratti salphataa fi fira fixataati kan jirtu. Isiinis kana kan hubattee fakkaatti. Kanaaf worri kana dura paartii tokko malee jedhaa dhaadatu amma ammoo jijjiirama jijjiirama jedhaa dubbatu; umrii dheereffachuuf tattaafatu.
Woyyaanee kan dhamaase, boolla seentu kan dhabsiise qabsoo Oromoon xiqqaa-guddaan, magaaala-baadiyaan lubbuu qaalii woreegaa geggeesseedha. Qabsaayuun maal akka fidu agarre. Dhuma Woyyaanee arguudhaaf ammoo qabsicha eegalle finiinsuun fala ta’uu barre. Qabsoo itti fufa!
addunyaan woyyaanee tufuu
daawwii Angelaa Merkil
Previous articleQabsoon Oromoon geggeesse Woyyaaneen Somaaliyaa gadilakkistee akka baatuuf dhirqamsiise
Next articleGamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti tankaarfii cimaa fudhachuu qaba jedhu Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa